စီမံကိန်း၏အဓိကဦးတည်ချက် ၄ ရပ်နှင့် သော့ချက်ဖြစ်သော ထိုင်းငါးဖမ်းလုပ်ငန်းနှင့် ပင်လယ်စာကုန် လုပ်မှု ဒေသအပေါ်အထူး အာရုံစူးစိုက်ရန်။
မူဝါဒ မြှင့်တင် တည်ဆောင်မူ
ပင်လယ်စာ နှင့်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း အခန်းကဏ္ဍတွင် တရားဝင် စံပြရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားပိုမို တိုးမြှင့် လာစေရန် တရားဥပဒေပိုမို ခိုင်မာစေခြင်း၊ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းနှင့် ပင်လယ်စာ နှင့် အခန်းကဏ္ဍတွင် ကြပ်မတ်ရန် မူဝါဒနှင့်မူဘောင် ချမှတ်ထားခြင်း၊၊
ငါးဖမ်းလုပ်ငနါးနှင့် ပင်လယ်စာ အစားအစာထုတ်လုပ်မှု အဆင့်ဆင့်တွင် လူကုန်ကူးမှုနှင့် အလုပ်သမား အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု တို့ကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်နှင့်တိုက်ဖျက်နှိမ်နှင်းရန်အတွက် အစိုးရဝန်ထမ်းတို့ကို တွန်းအားပေးခြင်း၊၊
ပင်လယ်အစားစာနှင့် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လက်တွေ့ကျ ကောင်းမွန်သော အလုပ်သမားအဖြစ် အထောက်အကူပြုရန် အခြေခံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် လုပ်ငန်းခွင် အခွင့်အရေးများ ပင်လယ်အစား စာနှင့် (GLP). (စံပြုအလုပ်သမား ကဏ္ဍ) တိုးမြှင့် ပေးခြင်း ။
အလုပ်သမားနှင့် အလုပ်သမားအခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရသူ နှင့် ကလေးငယ်အပါအဝင် ကူညီပံ့ပိုး တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအဖွဲ့အစည်းနှင့် အလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့များ ဝင်ဆန့်နိုင်ရန်အတွက် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊၊
Covering 22 coastal provinces of Thailand
In recent years,anumber of graphic reports have triggered an increased awareness of the serious human and labour rights abuses committed in the Thai commercial fishing and seafood processing industries, particularly against migrant workers. The EU-Funded ILO “Ship to Shore Rights” Project (“Combatting Unacceptable Forms of Work in the Thai Fishing and Seafood Industry”) works closely with partners including the Thai Government, employers' organizations, workers' organizations and buyers towards the prevention and reduction of unacceptable forms of work in the Thai fishing and seafood processing sectors.
The project addresses4core objectives covering the 22 coastal provinces of Thailand, with special focus on Thailand’s key fishing and seafood regions including Samut Sakhon, Chonburi, Rayong, Chumphon, Surat Thani, Phang Nga, Phuket, Ranong, Trang, Songkhla and Pattani. The project is based and managed from Bangkok, withafield office in Phang Nga.
မကြာသေးမီနှစ်ကာလမှာ graphic report များတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းနှင့် ပင်လယ်အစား အစာကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းအတွင်း လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာချိုးဖောက်မှုများ လေးနက်စွာဖေါ်ပြနေလျှက် ရှိပါသည်။ အထူးအဖြင့် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်းသမားများအပေါ် လူ့အခွင့်အရေးချိုဖောက်မှုများ ပင်ဖြစ် သည်။ ထိုင်းအစိုးရ စက်မှုလုပ်ငန်းအလုပ်သမားအဖွဲ့နှင့် လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတို့က အဆိုပါ လူ့အခွင့် အရေးချိုးဖောက်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ တုပြန်နိုင်ရန်အားထုတ်မှု မြှင့်တင်လာကြသည်။ EU- ထောက်ပံ့မှုဖြင့် ILO စီမံကိန်းသည် အဆိုပါ ထိုင်းနိုင်ငံ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းနှင့် ပင်လယ်အစား အစာကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း အတွင်း လုပ်ရပ်ပုံစံများကို မည်သို့မှလက်ခံနိုင်မည်မဟုတ်ပါ သို့ဖြစ်ပါ၍ အနီးကပ် တားဆီး ကာကွယ် လျော့ချနိုင်ရန် ဦးတည်သွား မည်ဖြစ်သည်။